Xaqqa uu Kirestahu ku wacan karo Caawimaad | LawHelp Minnesota
A Tenant’s Right to Call for Help (PDF)310.28 KB
Letter to landlord about action after emergency phone call (PDF)545.61 KB
Ma ka wacan karaa 9-1-1 gurigayga?
Haa waxaad xaq u leedahay, inaad ka wacato bilays ama gargaar degdeg ah gurigaaga. Waxa aad u wacan kartaa sababtoo ah dagaal qoyska dhexdiisa ka dhaca, xoogid, ama wax kale oo fal ah oo xun. Sidoo kale waxa aad u wici kartaa naftaada ama qof qoyska xubin ka ah oo u baahan caawimaad dhanka caafimaadka miyir iyo xiska ah.
Qolada guriga aan uga jiraa ma xadidi kartaa inta goor ee aan wicitaano 9-1-1 ah aan sameyn karo?
Maya. Qolada guriga aad uga jirtaa ma xadidi karaan inta goor ee aad wicitaan sameyn karto kaamana mamnuuci karaan inaad bilayska ama adeegyada gargaarada degdeg ah aad wacato.
Qolada guriga aan uga jiraa ma ii ciqaabi karaan ka wicida 9-1-1 gurigayga awgii?
Maya. Lagugma ciqaabi karo wicida bilayska ama dalbashada gargaar xataa hadii uu liiskaagu oronayo waa laguu ciqaabi karaa hadii aad sameyso. Tusaale ahaan, qolada gurigu kaagama saari karaan guriga ama ma kordhin karaan kiradaada sababtoo ah waxa aad wacatay bilayska.
Qoladu guriga aan uga jiraa ma iga saxiixi kartaa liis ama warqad aan ku ogolaanayo inaanan wici karin bilayska ama gargaarada degdeg ah?
Maya. Xaquuqdaada aad ku wici karto bilayska ama gargaarka degdeg ah waxaa sugaya sharciga Minnesota. Qolada guriga aad uga jirtaa iskuma dayi karaan inay kugu khasbaan inaad ka tanaasusho xaquuqdaada aad gargaar ku wacan karto.
Ka waran hadii deegaanka hoose uu ka jiro sharci ciqaaba kiraystayaasha ama qolada guryaha leh wicitaanada badan ee 9-1-1 ka laga soo waco gurigooda?
Sharciga gobolku waxa uu leeyahay laguuma ciqaabi karo wicitaanada caawimaad helida – in kasta ha ahaato inta goor ee aad waco caawimaad. Guriga lagaagama saari karo ama laguma ganaaxi karo xataa hadii ay jiraan sharciyo magaaladu leedahay oo oranaya qolada gurigu waa inay guriga ka saartaa ama ay ganaaxdaa kiraystaha tiro cayiman oo wicida 9-1-1 ah ka dib.
Hadii sharciyada magaal u yaal ama mid gobolku leeyahay aysan iswaafaqsanayn, raac sharciga gobolka. U sheeg qolada guriga inay eegaan Qodobka xeerka ee Minnesota Statute §504B.205.
Ka waran hadii wicitaanadayda 9-1-1 si aan naftayda u ilaaliyo loo isticmaalo in aniga la igu dhibaateeyo?
Inaad la kulanto wax ciqaab ah oo ku salaysan wicidaadda 9-1-1, sida soo sheegida heshiis jabin, ogaysiis guri ka bixida ah ama joojinta liiskaaga guriga aad ku degan tahay, waa sharci-darro.
Isticmaal foomka halkan ku lifaaqan si aad ugu sheegto qolada guriga xaquuqdaada sharcigu kuu ogol yahay ee aad ku wacan karto bilayska ama gargaar degdeg ah sababtoo ah dagaal qoyska dhexdiisa ka dhaca, xoogid, ama wax kale oo fal ah oo xun. Warqadu waxa ay ka codsataa qolada gurigu inay ka noqdaan ciqaabta ama falka xun ee ay damacsan yihiin.
Ogow: hadii wax adiga ama qof marti kuu ahi uu sameeyaa ay ku xad-gudbaan heshiiska liiskaaga, qolada guriga aad uga jirtaa waxa ay kuu isticmaali karaan taa adiga laakiin uma isticmaali karaan wicida bilayska ama adeegyada degdeg ah sabab ay guriga kaaga saaraan.
Maxaan sameyn karaa hadii qolada guriga aan uga jiraa aysan u hogaansamayn sharciga gobolka?
Waxa aad ku dacaweyn kartaa wixii jabin ah ee ku saabsan sharcigan. Waxaad kaloo waydiisan kartaa maxkamadi inay kuu xukumo $250 halkii jabin oo kasta AMA waxa aad waydiisan kartaa in lagu siiyo wixii xoolo ah ee dhib ah ee kaa dhumay (sida, kharashka guurida), hadba kii weyn.